Aqalka sare oo go’aano ka soo saaray khilaafka Golaha Shacabka iyo wararkii ugu dambeeyey - Caasimada Online
Home Warar Aqalka sare oo go’aano ka soo saaray khilaafka Golaha Shacabka iyo wararkii...
Aqalka sare oo go’aano ka soo saaray khilaafka Golaha Shacabka iyo wararkii ugu dambeeyey
Muqdisho (Caasimadda Online) – Guddigii Aqalka sare ee ku baxay xalinta khilaafka Golaha Shacabka ayaa maanta soo saaray go’aano dhowr qodob ka kooban, kaddib markii ay la kulmeen dhinacyada uu khilaafka u dhaxeeyo iyo Madaxda dowladda.
Gudiga ayaa waxa uu sheegeen in ay la kulmeen dhinacyada uu khilaafka u dhaxeeya sida gudoomiyaha golaha shacabka iyo goomiye ku xigeenka koowaad Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxwenyne Farmaajo.
Maxamuud Maxamed Axmed Mashruuc oo ka mid ah xubnaha gudiga ayaa sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka uu ka aqbalay gudiga in uu u hogaansamo Sharci hoosaadka u yaalla golaha Shacabka kana dalbaday gudiga in xaalada amniga ee xarunta golaha shacabka lagu soo celiyo sidii uu ahaa khilaafka ka hor.
Dhanka kale gudiga waxa uu la kulmay gudoomiye ku xigeenka kowaad waxa ayna u soo jeediyeen in uu ka shaqeeyo sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soocelin lahaa in uu ka shaqeeyo qabashada gudiga joogtada ah si uu u agaasime habraaca mooshinka yaalla gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Guddigan Maanta warbixinta siiyay Xildhibaanada Aqalka sare oo ka kooban 7 xubnood ayaa waxaa la magacaabay 17 Bishaan Maarso,six al looga gaarao khilaafka ka dhashay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh cusmaan Jawaari.
Hadaba, Halkan ka Akhriso, Warbixinta Guddiga:
Guddiga isagoo gudanayo waajibaadka Dastuuriga ah ee ku cad qodobka 61-aad farqaddiisa 1aa, waxaa uu guda galay xilkii loo igmaday, waxaa uu kulamo kala duwan uu la qaatay dhammaan madaxda qaranka oo ay quseyso xal u raadinta khilaafka soo kala dhex-galay golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya .
Mas’uuliyiinta uu guddiga kulanka uu la qaatay waxaa ka mid ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullahi Farmaajo, guddoomiayah golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, guddoomiye ku xigeenka 1-aad Muudey iyo Mahad Cawad oo ah guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee golaha shacabka iyo Ra’iisulwasaare Xasan Cali Kheyre.
Kulanka guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiye ku xigeenka 2-aad:
Kulanka oo dhacay Maarso 17, 2018-kii, guddiga waxaa uu la qaatay guddoomiyaha iyo ku xigeenka 2-aad falan-qeyn ku wajahan sida khilaafka uu ku bilowday iyo sida ugu haboon ee xal looga gaari karo .
Guddiga waxaa uu guddoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo sharuucda u yaalla golaha shacabka sida xeer-hoosaadka golaha shacabka Soomaaliya iyo Dastuurka KMG ah.
Guddiga, guddoomiyaha iyo ku xigeenka 2-aad ee golaha shacabka waxaa ay isla qaateen in muhiim tahay in la qaato mas’uuliyad wadareed ku wajahan in dalka laga badbaadiyo wax kasta oo dhaawici karo deganaashaha siyaasadeed iyo midda amni ee qaranka.
Kulanka guddiga iyo guddoomiye ku xigeenka 1-aad:
Waxaan ka wadahadalnay nuxurka muranka hareeyay golaha shacabka iyo sidii xal looga gaari lahaa.
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad waxaa uu sheegay in khilaafku uu salka ku hayo diidmada guddoomiyaha golaha shacabka ee sharciyadda mooshinka, guddiga waxaa uu ku war-geliyey guddoomiye ku xigeenka 1-aad in ay la kulmeen guddoomiyaha baarlamaanka uguna baaqeen in ay u hoggaasamo xeer hoosaadka golaha shacabka .
Kulanka guddiga iyo Ra’iisulwasaaraha:
Maarso 18, 2018, Guddiga ayaa kulan la qaatay ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, waxaana looga hadlay khilaafka golaha shacabka iyo inaysan saameyn hannaanka habsami u socodka dowladnimo, guddiga waxaa uu ku talo bixiyey in xarunta golaha shacabka lagu celiyo amnigeeda sidii uu ahaa.
Ra’iisulwasaaraha waxaa uu ballan qaaday in uu ka howlgali doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii horay u joogi jirtay xarunta golaha shacabka arrinkaasna uu kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska.
La Kulanka Guddiga madaxweynaha Jamhuuriyadda :
Guddiga waxaa uu warbixin ku saabsan arrinta khilaafka baarlamaanka la wadaagay madaxweynaha, guddiga waxaa uu madaxweynaha uu ka codsaday in uu soo faro-geliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal looga gaari lahaa khilaafka golaha shacabka.
Madaxweynaha waxaa uu ballan qaaday in uu qaadanayo kaalintiisa Dastuuriga ah si loo xalliyo khilaafka golaha shacabka.
Guddiga waxaa uu ka codsanayaa dhinacyada khilaafka soo kala dhex-galay ee golaha shacabka in ay joojiyaan dhammaan ololaha siyaasadeed iyo fariimaha warbaahinta la isku weydaarsanayo eek u wajahan khilaafka mooshinka ka dhashay, inta xal laga gaarayo arrimaha kale ee la xiriira khilaafkan.
Guddiga waxaa uu soo jeedinayaa in mooshinka maamulkiisa loo maro I waafaqsan qodobka 65aad, faqradiisa 4aad ee dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya iyo qodobka 9aad faqradiisa 4aad ee xeer-hoosaadka golaha shacabka.